Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki Wokuvulwa Kohlobo LaseChina | Xinneng
Iyunithi epholile yomoya
Ukupholisa umoya kulapho ipompo yokushisa epholile epholisayo iyunithi emaphakathi yokupholisa umoya esebenzisa umoya njengomthombo wamakhaza (ukushisa) namanzi njengomgogodla (wokushisa) ophakathi. Njengemishini ehlanganisiwe yemithombo ebandayo neyokushisa, iphampu yokushisa epholile emoyeni iqeda izingxenye eziningi ezisizayo ezifana nemibhoshongo yokupholisa, amaphampu wamanzi, ama-boilers nezinhlelo ezihambelana namapayipi. Uhlelo lunesakhiwo esilula, songa indawo yokufaka, ukugcinwa okulula nokuphathwa, futhi konga amandla, ikakhulukazi afanele izindawo ezingenayo imithombo yamanzi. Ngakho-ke, amayunithi wepompo wokushisa opholile emoyeni imvamisa kuyisixazululo esincanyelwayo semiklamo eminingi yobunjiniyela be-HVAC engenawo ama-boilers wokushisa, ama-heat grids, noma eminye imithombo yamandla ezinzile nethembekile, kepha edinga ukufakwa komoya wonyaka. Uhlelo oluphakathi nendawo noluphakathi nendawo oluphakathi nendawo olunezinsimbi zokuphela ezifana namapayipi namabhokisi okufaka umoya onezici zokuhlelwa okuguqukayo nezindlela ezahlukahlukene zokulawula.
Amayunithi we-condensing yizinto ezibaluleke kakhulu ekamelweni lonke elibandayo. Iyunithi ye-condensing imvamisa umhlangano ophakeme wohlelo lwefriji olufaka ukuhlangana kwe-compressor, condenser, motor motor, izilawuli kanye nepuleti ekhuphukayo. sakha futhi sakha umugqa oguquguqukayo womoya opholile, amanzi apholile kanye nama-remote condensing units asuka ekamelweni elincane elibandayo le-monoblock refrigeration unit kuya kuhlelo olukhulu kakhulu lwefriji yezimboni.
Ikhwalithi yethu ephezulu, imikhiqizo yensimbi yokunciphisa ushizi ifaka iyunithi yokufinyela ngaphandle, iyunithi yokujiya yangaphakathi, iyunithi evuthayo yomoya opholile, i-rack refrigeration system kanye neyunithi yefriji ye-monoblock, eyenzelwe ukonga amandla nokusebenza kwayo futhi inikezwa ngokukhetha okuphelele kwezici ezijwayelekile futhi izinketho ukuhlangabezana nanoma yiziphi izinhlelo zokusebenza zefriji zentengiso.
Le mikhiqizo yochungechunge ifaka isakhiwo sohlobo lwebhokisi nge-semi-hermetic compressor, okuyi-compact futhi ebukeka kahle. Zingasetshenziswa emahhotela, ezindaweni zokudlela, emithini, kwezolimo, ezimbonini zamakhemikhali kuzo zonke ezinye izindawo lapho kudingeka khona ukubanda okubandayo.
Imodeli Ukunikezwa kwamandla kagesi Umlandeli we-condens
W Umlandeli we-condens
okwamanje A Ukuhwamuka
izinga lokushisa I-Condenser Isitoreji samanzi Ubukhulu ① mm Usayizi wokufaka ① mm Iyaxhuma
ipayipi Φ mm Isisindo kg
m³ / h Imodeli Ivolumu A B C D E ukuncela Uketshezi
I-4YG-5.2 120 * 2 0.26 * 2 6000 FNHM-049 10 1010 710 680 960 445 22 12 168
I-4YG-7.2 120 * 4 0.26 * 4 7200 FNHM-070 15 1240 795 1000 1140 755 28 16 249
I-4YG-10.2 120 * 4 0.26 * 4 12000 FNHM-100 17 1240 845 1100 1140 805 28 16 325
I-4YG-15.2 120 * 4 0.26 * 4 18000 FNHM-140 22 1240 845 1300 1140 805 42 22 376
I-4YG-20.2 370 * 2 0.80 * 2 24000 FNHM-150 25 1600 925 1300 1500 885 42 22 397
I-4VG-25.2 250 * 4 0.54 * 4 24000 FNVT-220 40 1300 460 800 1260 420 54 22 323
I-4YD-3.2 90 * 2 0.20 * 2 -5 ~ -40 ℃ ③ -10 ~ -35 ℃ 6000 FNHM-033 6 1010 710 570 960 445 22 12 133
I-4YD-4.2 120 * 2 0.30 * 2 6000 FNHM-041 8 1010 710 570 960 445 28 12 139
I-4YD-5.2 120 * 2 0.26 * 2 6000 FNHM-049 10 1010 710 680 960 445 28 12 165
I-4YD-8.2 120 * 4 0.26 * 4 7200 FNHM-070 17 1240 795 1000 1140 755 35 16 298
I-4YD-10.2 120 * 4 0.26 * 4 12000 FNHM-080 17 1240 795 1100 1140 755 35 16 315
I-4VD-15.2 120 * 4 0.80 * 4 12000 FNHM-120 22 1240 845 1200 1140 805 42 22 391
I-4VD-20.2 370 * 2 0.80 * 2 24000 FNHM-150 25 1600 925 1200 1500 885 54 22 454
①Idatha ethile izoncika ekukhiqizweni kwangempela.
Ukupholisa okungeziwe noma ukuvinjelwa kokudonswa teukushisa kufanele kuthathwe lapho izinga lokushisa lokuhwamuka lingaphansi kuka -15 ℃.
HenUma izinga lokushisa lokuhwamuka lingaphansi kuka -20 ℃, ukupholisa okungeziwe noma ukuvinjelwa kokushisa kokudonsa noma izinyathelo zokupholisa izifutho kufanele zithathwe.
Langaphambilini I-Wall Mounted Monoblock Refrigeration Unit
Olandelayo: Okupholisa Amanzi